ALDI Alemana mandray tsara ny crisps ovy mipetaka - Potatoes News
Zoma, Septambra 17, 2021
Tsy misy vokany
Hizaha ny valiny rehetra
Hetsika sy fampirantiana
Sendika sy fikambanana
Fitaovana eny an-tsaha
Zezika sy fanafody famonoana bibikely
fiarovana ny vokatra
Miambina ny fijinjana
Vokatra fanodinana ovy
Ny teknolojia fanodinana ovy
SORATRA SY FAMPIANARANA
ALDI Alemana mandray tsara ny paty ovy voatetika
Modern Plant-based Foods Inc. dia hanao lisitra ireo Snacks avy amin'ny Sun's, "Posed Potato Crisps" miaraka amin'ny Alemaina rojo fivarotana lehibe indrindra, ALDI. Hanomboka amin'ny toerana fivarotana 285 ALDI ireo vokatra ireo.
"Faly izahay fa voatanisa amin'ny iray amin'ireo gadra fivarotana lehibe malaza indrindra eto an-tany," hoy i Tara Haddad, mpanorina ary tale jeneralin'ny Sakafo Miorina amin'ny zavamaniry. “Ny mpivarotra sy ny mpanjifa dia samy mahita haingana ny maha-matsiro sy mahafa-po ireo poti-bokintsika mipoitra. Manomboka amin'ny fonosana marani-tsaina ka hatrany amin'ny akora mahasoa dia tsy isalasalana fa ho hitantsika ny fitakiana fitomboan'ny vokatra. Ny fananana mpivarotra lehibe manitatra ny fanoloran'ny mpanjifa efa misy azy mba hanampiana Snacks avy amin'ny Masoandro dia famantarana iray hafa amin'ny fahafaha-mitombo manan-tombo azo alaina ho an'ity zotram-vokatra ity. Ity no dingana voalohany lehibe ahitantsika ny mpivarotra eran-tany, ary faly indrindra amin'ity fotoana ity izahay. ”
ALDI, fivarotana fivarotana lehibe iray an'ny fianakaviana alemà natsangana tamin'ny 1946 ankehitriny dia manana fivarotana 11,000 mahery any amin'ny firenena 20 manana fidiram-bola avaratry ny USD100bn. Miaraka amin'ny fivarotana any Belzika, Netherlands, Luxembourg, France, Poland, Spain, Denmark, ary Portugal, ny vondrona ALDI dia miasa ihany koa ny tsenan'i Trader Joe any Etazonia.
Sakafo maivana avy amin'ny zavamaniry maoderina avy amin'ny Masoandro "Crisps Ovy Pated" dia maivana sy be rivotra poti vita avy amin'ny ovy voajanahary, voa, ary zava-manitra nipoitra avy eo. Ny chips dia vegan ary tsy misy gluten, kolesterola ary tavy tototry. Ireo tsakitsaky vegan dia misy tsiro efatra samy hafa: crème souris sy chive, sira an-dranomasina sy dipoavatra vaky, barbecue tangy ary fromazy nacho. Amin'izao fotoana izao, ny "Posed Potato Crisps" dia any amin'ny fivarotana maherin'ny 5,000 manerana an'i Etazonia sy Kanada.
Tags: GermanyCrisps ovy voatetika
Tsiro vaovao 3 Roger & Roger SA
Septambra 17, 2021
Asa iraisan'ireo manampahaizana manokana momba ny CIP iraisam-pirenena ovy
Ny starch ovy dia novokarina tany Danemarka tamin'ny ambaratonga indostrialy hatramin'ny taona 1900.
Solentum BV's SolEye Vidin'i RMA-Techniek
Haith manendry talen'ny fitantanana vaovao miaraka amin'i Nigel Haith mifindra amin'ny toeran'ny filoha
'Taorian'ny iray taona sy tapany tsy nisy hetsika ovy, tonga ny fotoana hihaonana indray'
04Oct(4 okt)8: 59 pm08(8 okt)8: 59 amAgroprodmash Moscow 2021
AGROPRODMASH dia fampirantiana iraisam-pirenena ho an'ny fitaovana, teknolojia, akora ary akora ilaina amin'ny indostrian'ny fikarakarana sakafo. Nandritra ny roapolo taona mahery dia fampisehoana mahomby an'ny
AGROPRODMASH dia fampirantiana iraisam-pirenena ho an'ny fitaovana, teknolojia, akora ary akora ilaina amin'ny indostrian'ny fikarakarana sakafo.
Nandritra ny roapolo taona mahery dia fampisehoana mahomby ny vahaolana tsara indrindra eran'izao tontolo izao izay ampiharin'ny orinasa mpanodina sakafo Rosiana avy eo.
AGROPRODMASH no fitaovana fampivoarana orinasa tonga lafatra:
ny vahaolana ara-teknolojia tsara indrindra amin'ny fikarakarana sakafo
rafitra fanodinana indostrialy fanodinana sakafo
fitaovana, fitaovana ary tetikasa fonosana vaovao
teknolojia tsy misy fako malala-monina
ny rindrambaiko farany
AGROPRODMASH no fampirantiana voalohany an'i Rosia ao amin'ny sokajy Indostrian'ny Sakafo: Fitaovana sy akora mpiorina * amin'ny faritra rehetra:
isan'ny fampirantiana sy mpitsidika
isan'ny firenena fampirantiana
AGROPRODMASH dia toeram-pivoriana isan-taona ho an'ireo orinasa rosiana sy vahiny liana amin'ny haitao mandroso, fitaovana, akora ary akora ilaina amin'ny indostrian'ny fikarakarana sakafo.
4 (Alatsinainy) 8:59 maraina - 8 (Zoma) 8:59 alina
Expocentre Fairgrounds Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, 14 Moskva Moskva 123100 Russia
05Oct(5 okt)9: 01 pm07(7 okt)9: 01 amManintona ny voankazo 2021
Ny voankazo mahavariana 2021 dia fantatra amin'ny maha-fiombonambe iraisam-pirenena ary koa sehatra iray, ahafahanao mahita vokatra vaovao sy hahafantatra bebe kokoa momba ny
Ny voankazo mahavariana 2021 dia fantatra amin'ny anarana hoe sehatra iraisam-pirenena ary koa sehatra iray, ahafahanao mahita vokatra vaovao amin'ny toerana iray sy hianatra bebe kokoa momba ny fanavaozana eo an-tsaha.
Ny fampirantiana dia hatao ao amin'ny IFEMA Feria de Madrid manomboka ny faha-5 ka hatramin'ny faha-7 Oktobra ary horaisina an-tsehatra ireo mpanentana 2000 sy mpitsidika mpivarotra 95 000 mahery, misolo tena firenena 140 mahery.
Ny voankazo mahavariana 2021 dia fivoriana ara-teknolojia mandroso afaka mamorona fiantraikany an'arivony, mampiakatra ny fahatsiarovan-tena amin'ny orinasa ary mampiseho ny vokatr'izy ireo amin'ireo mpividy, mpaninjara ary mpivarotra an'arivony.
Izany no mahatonga ny hetsika ho sehatra tambajotra matihanina lehibe indrindra eto an-tany manokana amin'ny sehatry ny voankazo sy legioma. Ny fampirantiana dia hanolotra faritra maro be takiana indrindra ao amin'ity sehatra ity:
Legioma sy voankazo vaovao
Harena sy zavamaniry
Famokarana biolojika sns.
5 (talata) 9:01 maraina - 7 (alakamisy) 9:01 alina
Feria de Madrid IFEMA Avda. del Partenón, 5 28042 Madrid Espana
28Oct(28 okt)9: 03 pm30(30 okt)9: 03 amPMA Convention Summit Fresh & Expo 2021
Tamin'ny Fihaonamben'ny PMA Fresh Summit & Expo dia mpandray anjara maherin'ny 20,000 nanerana ny vokatra voajanahary sy ny felam-boninkazo manerantany no niara-nianatra, nifandray, nanorina fifandraisana,
Tao amin'ny Convention PMA Fresh Summit & Expo dia mpandray anjara maherin'ny 20,000 manerana ny vokatra manerantany sy ny tadin'ny voninkazo no niara-nianatra, nifandray, nanorina fifandraisana ary nanao asa aman-draharaha.
28 (Alakamisy) 9:03 maraina - 30 (Sabotsy) 9:03 alina
Ernest N. Morial Convention Center 900 Convention Center Blvd New Orleans, LA 70130 Etazonia
Saika tsy niova ny Index des vidin-tsakafo FAO (FFPI) tamin'ny desambra 2018
3 taona lasa izay
Ny vanim-potoana fambolena mangatsiaka maina dia mety hiteraka olana amin'ny fifehezana ny ahitra ho an'ny mpamboly ovy
Antsoy izahay: +386 69622745
© 2021 World Potatoes news - Mamorona sy mampiroborobo loharano AMA.
Login amin'ny kaontinao eto ambany
Forgoten Password? Hiditra Mpikambana
Mamorona kaonty vaovao!
Fenoy ny peo voasoratra mba hosoratana anarana
Ilaina ny saha rehetra. Hiditra
Raiso ny tenimiafinao
Azafady ampidiro ny anaranao na ny adiresy mailaka mba hamerenanao ny tenimiafinao.